सडक दुर्घटना: देशभर 'ब्ल्याक स्पट' - Himalkhabar.com
रिपोर्टशनिबार, आषाढ ११, २०७३
सडक दुर्घटना: देशभर ‘ब्ल्याक स्पट’
देशभर भइरहेका मध्ये आधाभन्दा बढी दुर्घटना हुने काठमाडौं उपत्यकामा २७ वटा ‘ब्ल्याक स्पट’ छन् ।
१८ जेठमा भक्तपुरका दुई स्थान लोकन्थली र मनहरामा भएका सडक दुर्घटनामा दुई जनाको ज्यान गयो। लोकन्थलीमा तीन जना सवार बा ७४ प ५२४८ नम्बरको मोटरसाइकल सडक बीचको रेलिङमा ठोक्किएको थियो। तीनमध्ये बाइक चलाइरहेका सुरेन्द्र श्रेष्ठ (२७) को उपचारको क्रममा मृत्यु भयो।
त्यस्तै, बा ५९ प ४९७५ नम्बरको मोटरसाइकलले मनहरामा ठक्कर दिंदा सडक काट्दै गरेका युवकको मृत्यु भयो। उपचारको क्रममा २१ जेठमा काठमाडौं मेडिकल कलेजमा मृत्यु भएका ती युवकको सनाखत हुन सकेन।
कोटेश्वर–सूर्यविनायक सडकखण्डको लोकन्थली र मनहरा क्षेत्रलाई महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले उपत्यकामा धेरै दुर्घटना हुने ‘ब्ल्याक स्पट’ को सूचीमा राखेको छ। उपत्यकाका सडकमा २७ वटा ‘ब्ल्याक स्पट’ छन्।
दोहोरिएर दुर्घटना भइराख्ने ठाउँलाई सडक सुरक्षा व्यवस्थापनमा ‘ब्ल्याक स्पट’ भनिन्छ। महाशाखाको अप्रेशन शाखाका इन्स्पेक्टर मधुसूदन सिलवालका अनुसार, उपत्यकामा सबभन्दा खतरनाक ‘ब्ल्याक स्पट’ चाबहिल, जोरपाटी, बबरमहल र माइतीघर हुन्। (हे. बक्स)
उपत्यका बाहिर क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अत्तरिया अन्तर्गत ५५, कोहलपुर अन्तर्गत ७५, बुटवल अन्तर्गत ५८, पथलैया अन्तर्गत ५६ र इटहरी अन्तर्गत ११३ वटा ‘ब्ल्याक स्पट’ छन्। उपत्यकामा महीनामा औसत ३५० वटा दुर्घटना हुन्छ, जसमा सरदर ३० जनाको ज्यान जाने गरेको छ।
पछिल्लो १० वर्षमा देशभर सडक दुर्घटना बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०६२/६३ मा काठमाडौं उपत्यकामा एक हजार ६७३ दुर्घटना भएर ९३ जनाको मृत्यु भएकोमा आव २०७२/७३ को वैशाख मसान्तसम्म चार हजार ४५४ दुर्घटना र १३६ जनाको मृत्यु भयो। देशभरमा हुने दुर्घटनामध्ये आधा उपत्यकामा हुन्छ। मोटरसाइकल र स्कूटर बढी दुर्घटनामा पर्ने गरेका छन्। यो आवको वैशाख मसान्तसम्ममा दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने १३६ मध्ये ६४ जना दुई पांग्रे र ५१ जना पैदल यात्रु छन्।
बा ३० प ९८१६ नम्बरको मोटरसाइकल १५ जेठमा सानेपामा अनियन्त्रित भएर लड्दा पछाडि बसेकी अनिता थापालाई बा १ ज ९९३३ नम्बरको माइक्रोबसले किच्यो र उपचारको क्रममा उनको ज्यान गयो।
३ जेठमा कीर्तिपुरको आर.जी. डिपोमा बालुवा भरेर निस्कन लागेको बा १ ख ९८८६ नम्बरको मिनी ट्रकको ठक्करबाट डिपो परिसरभित्रै दुई वर्षीय युगेश लामाको मृत्यु भयो। १५ जेठमा जोरपाटीमा बा ४ च ३५७३ नम्बरको भ्यानको ठक्करबाट हर्कबहादुर तामाङ (७५) को ज्यान गयो।
यी तीनवटै दुर्घटना चालकको असावधानीबाट भएको महानगरीय ट्राफिक महाशाखाका प्रमुख डीआईजी प्रकाश अर्याल बताउँछन्। उनका अनुसार, धेरैजसो सवारीचालक लापरबाह छन्, उनीहरू ट्राफिक नियम पालना नगरी तीव्र गतिमा सवारी चलाउँछन् र कहीं न कहीं पुगेर दुर्घटना गराइहाल्छन्। धेरैजसो दुर्घटना तीव्र गति, ओभरटेक र मादक पदार्थ सेवनका कारण हुने गरेका छन्। “त्यसबाहेक, पैदलयात्रुले लापरबाहीका साथ सडक काट्दा दुर्घटना भएको पाइएको छ”, डीआईजी अर्याल भन्छन्, “अलिकति मात्र सावधानी अपनाए दुर्घटना हुँदैन।”
यसरी दुर्घटनाको दर बढ्दै जाँदा स्वाभाविक रूपमा सुरक्षित यात्राप्रति चासो बढेको छ। माइतीघर–तीनकुने सडक फराकिलो बनेपछि बबरमहल क्षेत्रमा दुर्घटना बढ्यो– जथाभावी सवारी मोड्ने, जेब्राक्रसिङबाटै घुम्ने आदि कारणले।
त्यसलाई रोक्न ट्राफिक महाशाखाले डिभाइडरको क्रसिङ उँचो पार्न लगाउनुको साथै ठूला गाडीहरूलाई बीचको ‘स्पीड वे’ मा रोक लगाएको छ। त्यसपछि बबरमहलमा दुर्घटना केही कम भएको ट्राफिक महाशाखाको भनाइ छ।
ट्राफिक इन्जिनियर आशिष गजुरेल चालकको बानी–व्यवहार, सवारी नियमको पालना, सडकको अवस्था–बनावट र सवारी साधनको अवस्थामा दुर्घटना निर्भर हुने बताउँछन्। उनका अनुसार; गाडी, साइकल, मान्छे सबैको लागि एउटै सडक भएपछि स्वाभाविक रूपमा दुर्घटना बढ्छ। उपत्यकाका सडकहरूमा फूटपाथ र साइकल लेन छैन। व्यस्त रहने सबै सडक न्यूनतम ३.५ मिटरको लेनमा छैनन्। मोड सकिने बित्तिकै नजिक–नजिकै जेब्राक्रसिङ छन्।
कतिपय ठाउँमा स्पीड ब्रेकरका कारण पनि दुर्घटना हुने गरेको ट्राफिक इन्जिनियर गजुरेल बताउँछन्। त्यस्ता ठाउँमा सिमेन्टेडको नभई रबरको ब्रेकर राख्नुपर्नेमा त्यो हुनसकेको छैन। “तर, सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा ट्राफिक नियम कार्यान्वयन र त्यसको पालना हो”, गजुरेल भन्छन्, “त्यसपछि आउँछ, भौतिक पूर्वाधारको कुरा।”